Norowe - ALinks
Uyifumana njani i-visa eNorway?
January 10, 2022 UMaitri Jha Norowe, ivisa
Ukucwangcisa uhambo oluya eNorway, ke kwinyathelo lokuqala, kuya kufuneka ufake isicelo sevisa. Kukho iindidi ngeendidi zeeVisa onokuzisebenzisa. Uhlobo lwevisa oyifunayo luxhomekeke kwinjongo yotyelelo
January 8, 2022 UAntika Kumari impilo, Norowe
Inkqubo yokhathalelo lwempilo yaseNorway isekwe kwimigaqo yofikelelo jikelele, ukunatyiswa kwamagunya, kunye nokhetho lwasimahla lomnikezeli. Ngokwesiseko sentloko, inkcitho yaseNorway kukhathalelo lwempilo yeyona iphezulu kwihlabathi. Ilungu ngalinye leNorwegian National Insurance
Ufumana njani umsebenzi eNorway? Isikhokelo esifutshane sakhe wonke umntu
Novemba 15, 2021 UMaitri Jha imisebenzi, Norowe
Ukuba sele unayo imvume yokuhlala eNorway, okanye ukuba ungumNorway, i-EU, okanye ummi we-EEA, unokuvele uskrolele ezantsi ukuze ufunde ngendlela yokufumana umsebenzi eNorway. Ukuba awunayo i-
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eNorway? Isikhokelo esikhawulezayo
Agasti 28, 2021 UKaruna Chandna iibhanki, imali, Norowe
Kuya kufuneka uvule iakhawunti yebhanki nje ukuba ufike eNorway. Ingakumbi ukuba ucwangcisa ukuhlala ngaphezulu kweenyanga ezintandathu. Emva kokufumana iintlawulo zomvuzo wakho, uya kuba nakho ukulawula iimali zakho. Nje ngeziphumo
Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko eNorway? Iimbacu kunye nabafuna indawo yokukhosela eNorway
Agasti 30, 2020 UMaitri Jha Norowe, ababaleki
Ngaba ujonge ukuhlala eNorway, okanye ufuna indawo yokukhosela eNorway? Kuya kufuneka uyizame, okanye kutheni ungazami? Ngaphandle kwamathandabuzo, iNorway yenye yezona ndawo zintle eMhlabeni. Kwakhona likhaya labaninzi
Iindlela zeZothutho eNorway
Novemba 12, 2019 UAntika Kumari yibakhona, Norowe
INorway inezithethe zakudala zokuhambisa amanzi, kodwa indlela, umzila kaloliwe kunye nokuthuthwa komoya kuye kwanda ngokubaluleka ngekhulu lama-20. Ngenxa yobuninzi babantu, izithuthi zikawonke-wonke zakhiwe kancinci kwiindawo ezisemaphandleni eNorway, nangona kunjalo izithuthi zikawonke-wonke zingene, kwaye nakwiidolophu ezihamba kakuhle
Iindawo zeBakhenkethi abakumanqanaba aphezulu eNorway
Novemba 12, 2019 UAntika Kumari Norowe
INorway lilizwe laseScandinavia eliquka iintaba, amagquma, kunye nemikhosi engaselunxwemeni yonxweme. IOslo, elikomkhulu, sisixeko esinendawo eluhlaza kunye namaziko olondolozo lwembali. Iinqanawa zeViking zenkulungwane ye-9 ezigciniweyo ziboniswa kwiMyuziyam yokuHamba ngeViking yaseOslo. IBergen, enezindlu ezimibalabala ngemibala,
Gcina imali yakho kwiiBhanki zaseNorway
Novemba 11, 2019 UAntika Kumari imali, Norowe
Iibhanki eziphambili eNorway zezi: iBhanki yaseNorway AS. ILuster Sparebank. Ivenkile yeBhanki yeVenkile ASA. Yasekwa ngo-2006, BN Bank ASA. Ushwankathelo lweeBhanki eNorway Iibhanki zaseNorway zineebhanki zorhwebo ezili-17, iibhanki zokonga eziyi-105, kunye nenani elincinci leebhanki zikarhulumente. Igunya loLawulo lwezeMali eNorway lokongamela